युवाको मनमा स्वस्तिका ! - Movies Club Nepal
Home NewsKollyhood	युवाको मनमा स्वस्तिका !
by Movie Club Nepal २ भाद्र २०७६, सोमबार १३:२६ November 22, 2019
२ भाद्र २०७६, सोमबार १३:२६ November 22, 2019
बुटवल । सन २०१६ को अन्त पछि बुटवलकी स्वस्तिका खड्काको नामको अगाडी मिस टिन लुम्विनीको सेकेण्ड रनर अपको ताज र नाम थपियो । उसोत स्वस्तिका सानै देखि नृत्यमा रुचि राख्थिन उनि नाचौ २ को उपाधि विजेता समेत भएकी थिइन । स्वस्तिका अध्ययनले स्टाफ नर्स हुन तर उनि अहिले फेशन कोरियोग्राफरको नाममा परिचित छिन । नेपाल्स रोल मोडलको उपाधि पाए पछि झन उनि व्यस्त हुन थालिन ।
युवा अवस्थामानै उनि फेशन र मोडलिङ्ग क्षेत्रमा परिचित हुर्द गइन र अहिले उनको नाम नेपालको मध्य पश्चिम क्षेत्रमा निकै परिचित रहेकी छिन ।
बुटवलमा रहेको आरएन स्टाइलको ब्राण्ड एम्वेसडर समेत रहेकि उनि आधा दर्जन भन्दा बढी जिल्लामा कोरियोग्राफर , निर्णायकको भुमिकामा पुगेकि छिन । उनले ४ दर्जन भन्दा बढी प्रतियोगितामा निर्णायकको भुमिका आफुलाइ स्थापित गराएकी छिन ।
आफ्नो प्रेरणाको श्रोत फेशन कोरियोग्राफर रेशम न्यौपानेलाइ मान्नु हुने स्वस्तिका अनमोल केसिको डाइहार्ट फ्यान हुन । उनि आइकोनिक लिडर मा मोष्ट ट्यालेण्ट अर्वाड विजेता समेत भएकि थिइन ।पछिल्लो पटक फशेनमा लाग्न चाहाने युवालाइ स्वस्तिका खड्का एक बलियो उदारहण हुन ।
सुरक्षाको ठूलो मन !
२७ पुष २०७५, शुक्रबार १६:०६
डेब्यूमा उपासना २०७५ मा हिट
११ चैत्र २०७५, सोमबार ०९:५१
‘बुलबुल’ भ्यालेन्टाइन डेमा फिक्स !
२५ भाद्र २०७५, सोमबार १७:०३
२८ आश्विन २०७६, मंगलवार १७:२३
अब कथामा लगानी गर्न डराउँदैनन् : नम्रता श्रेष्ठ
१३ मंसिर २०७५, बिहीबार १६:०२
प्रदिप र अनमोल आफूहरुलाई प्रतिस्पर्धी मान्दैनन् ।
९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ११:०१